ဘေဘီလေးတွေအတွက် သွားပွတ်တံ ဒီလိုရွေးပါ - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 13/09/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဘေဘီလေးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ခံတွင်းသန့်ရှင်းတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတာက ဖေဖေမေမေတိုင်း လုပ်ပေးရမယ့် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ သွားနဲ့ ခံတွင်း သန့်ရှင်းတာက တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စပဲကိုး။ ဒီလိုမျိုး ဘေဘီလေးကို ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်တတ်အောင် သင်ပေးဖို့ဆိုရင် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘေဘီလေးကို သူတို့လေးတွေနဲ့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မယ့် သွားပွတ်တံ ရွေးချယ်ပေးတာပါ။ သွားပွတ်တံလေးက အဆင်ပြေမှလည်း ဘေဘီလေးက ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် သွားတိုက်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်တော့မပေါ့။ ဒီတော့ ဘေဘီလေးတွေအတွက် သွားပွတ်တံ ဘယ်လိုရွေးချယ်မယ် စိတ်ကူးလဲ…..
ဘေဘီလေးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး သွားပွတ်တံရွေးချယ်မယ်
ဘေဘီလေးအတွက် သွားပွတ်တံ ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို စဉ်းစားဖို့ လိုပါမယ်။
ဘေဘီလေးတွေက ငယ်သေးတာကြောင့် သွားပွတ်တံလေးတွေကလည်း ခပ်သေးသေးမှ ဖြစ်မှာပါ။ ဒီလို ခပ်သေးသေးလေးထဲမှာမှ ဘေဘီလေးရဲ့ ပါးစပ်နဲ့ သင့်တော်မယ့် အရွယ်အစားကို သေချာလေး ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါမယ်။
ဒါကြောင့် သွားပွတ်တံ ရွေးတဲ့အခါ အရင်ဆုံး စဉ်းစားရမှာက အရွယ်အစားကိုပါ။ အရွယ်အစား မှန်မှလည်း သွားတွေကို သေချာသန့်ရှင်းနိုင်မှာပါ။
ဘေဘီလေးရဲ့ သွားပွတ်တံက ကြမ်းနေတာမျိုးဆိုရင် ဘေဘီလေးအတွက် တော်တော်လေး အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေး သွားဖုံးကို မထိခိုက်စေဖို့အတွက် သွားပွတ်တံ အမွှေးနုနုလေးကို ရွေးချယ်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ဘေဘီလေးတွေကို သွားတိုက်ပေးတဲ့အခါ သွားလေးတွေကို သန့်စင်နေစေဖို့ဆိုရင် လက်ကိုင်လေးက အဆင်ပြေဖို့ လိုပါမယ်။ လက်ကိုင်က မိမိရရ ကိုင်ရ အဆင်ပြေမှလည်း သွားတွေကို အသေအချာ သန့်စင်နိုင်မှာပါ။
လက်ကိုင်က ကိုင်ရအဆင်ပြေတာအပြင် ချစ်စရာကောင်းနေစေဖို့လည်း ဂရုစိုက်ပါ။ ဘေဘီလေးက လက်ကိုင်ကို ကိုယ်တိုင် ကိုင်မတိုက်ပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လက်ကိုင်လေးနဲ့မှ သွားတိုက်ချင်စိတ် ဖြစ်တာပါ။
အရောင်က ချစ်စရာကောင်းရဲ့လား …….
နောက်တစ်ချက် သတိထားရမှာက အရောင်ပါ။ အရောင်လေးက ဘေဘီလေးတွေ ကြိုက်တဲ့ အနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အစိမ်းရောင် တောက်တောက်လေးတွေ ဖြစ်နေဖို့ လိုပါမယ်။ အရောင်ကို စိတ်ဝင်စားမှလည်း ဘေဘီလေးတွေက သွားတိုက်ဖို့ အတင်း မတိုက်တွန်းရတာပါ။
BPA free ဖြစ်ရဲ့လား……..
ဘေဘီလေးအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ သွားပွတ်တံက BPA ပါဝင်နေလား ဆိုတာကတော့ အမြဲ သတိထားရမယ့် အချက်ပါ။ ဒါကြောင့် သွားပွတ်တံကို အပေါ်က ပြောတဲ့ အချက်တွေ အားလုံး ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင်တော့ BPA ပါဝင်မှု ကင်းရဲ့လားဆိုတာကို သေချာလေး ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
နောက်ပြီးတော့ သွားအပြင် လျှာကိုပါ ပွတ်တိုက်သန့်စင်ပေးဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။
ကဲ…… သွားလေးတွေ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး ဘေဘီလေးကို ပြုံးလိုက်တိုင်း ချစ်စရာကောင်းနေအောင် ဘေဘီလေးတွေအတွက် သွားပွတ်တံ လေးကို သေသေချာချာရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ မေမေတို့ရေ………
Best Toothbrush for Kids https://www.sproutpediatricdentistry.com/blog/pediatric-dentistry/best-toothbrush-for-kids/ Accessed Date2September 2021
What’s the best toothbrush for kids? https://friscokidsdds.com/best-toothbrush-for-kids/ Accessed Date2September 2021
ဘေဘီလေးတွေ သီချင်းဆိုခြင်း ကနေ ဘာတွေရရှိမလဲ......
ဘေဘီလေးကို သာကူကျွေး လို့ရလား ......